Ezona wotshi zibalaseleyo kwiVenkile yokudlala kuGoogle | I-Androidsis
Ezona zixhobo zibalaseleyo zeewotshi ezisuka kwiVidiyo kaGoogle
UAron Rivas | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Kwiintsuku nje ezimbini ezidlulileyo, silayishe iposti apho sichaze khona uninzi lwazo ezona zixhobo zokubala zibalaseleyo kwiVenkile yokudlala. Ngoku, ukuqhubeka nomgca ofanayo, sikuzisa Ukudityaniswa okuhle kwezinye ii -apps ezinkulu zealam, esiyenzileyo emva kokuhamba ngokucokisekileyo kwivenkile, ukuze ungalali ngeentsuku apho kungafuneki ukuba wenze njalo.
Emva koko unokufumana ifayile ye- Uluhlu apho sichaza khona ii -apps ezininzi zealamEzisevenkileni efakwe ngaphambili kwi-Android yeselfowuni yakho, apho sikhankanya eyona misebenzi iphambili ayinikayo nganye kuzo, ukuze ufumane eyona isebenza ngcono kuwe. Masibone!
1 Isivusi (Ukulala Ukuba U Unako) - Isivusi
2 Vusa iAlarm: Istopwotshi kunye nexesha
3 Alarm elula
5 Iwotshi yealam
6 Iwoshi ye-alamu
7 Yishukumise ialam
8 I-alamu Clock kunye noMculo kunye neeRiddle
Isivusi (Ukulala Ukuba U Unako) - Isivusi
Kwimeko yokuqala yolu luhlu, sinalo Isivusi, yenye yewotshi ezihamba phambili kwiVenkile yokudlala, ngaphandle kothandabuza. Ukuhlala naye ebhedini ngengozi kuya kuba kwixesha elidlulileyo.
Phakathi kwemisebenzi enomdla kakhulu ekufuneka siyinikwe yile app, sifumana iindlela ezahlukeneyo zokucima ii-alamu esizenzileyo. Umzekelo, enye yezona ndlela zisebenzayo zokucima i-alamu kubandakanya ukuthatha ifoto yendawo ebikade ibhalisiwe kwindawo yogcino lwesicelo, nokuba yeyokuhlambela, ikhitshi, igumbi lokuhlala okanye nantoni na oyifunayo. Ukuba ifoto yakho ayithathiwe, ialam iyakuqhubeka ukukhala. Isishwankathelo, Isivusi siqinisekisa ukuphuma kwelanga ngexesha elimiselweyo ewe okanye ewe! Kwakhona, lewotshi ebalaseleyo yealam inokwenziwa ibe yeyakho kwimixholo eyahlukeneyo kunye nemibala.
Ukuvusa-Ukusa kweAlarm Clock
Umthuthukisi: Iialarm Clock yeAlarmy
[Ilifa] Alarmy (Lala ukuba U Can)
ixabiso: € 349,99
Vusa iAlarm: Istopwotshi kunye nexesha
Enye iwotshi ebalaseleyo esiye sayifumana, ngaphandle kwamathandabuzo. Alarm Clock iza ujongano olusebenze kakhulu, kunye neminye imisebenzi yewotshi yealam. Ngale nsiza kuza isibali xesha kunye nesitophuwotshi. Ukongeza, sinokuhlengahlengisa inqanaba levolumu yethoni yealam, esinokuthi siyikhethe ngokukhululekileyo, kunye nokunyuka kwayo ngokuthe ngcembe kwithoni. Ukongeza koku, kuya kusigcina sisazi ngemozulu yesixeko sethu.
Ialam yokuvuka nayo yenza ukuba kube nzima kuthi ukuba singaqhubeki ixesha elide ephupheni, kuba sinokukhetha ukhetho lwephazili ukwenza ii-alamu zingasebenzi, ekuya kuthi ngokucacileyo sizisombulule koku. Kukho ikhowudi ye-QR yokuskena, esiya kuyilungiselela nayiphi na ikhowudi ye-QR. Xa ialam ikhala, iya kufuna ukuskenwa kwale khowudi ukuyicima Ukuba eli nyathelo alenziwanga, liza kuqhubeka livakala.
Umthuthukisi: Iilebhu ze-AVG
Njengoko igama layo lisitsho, Alarm elula ayiniki amathuba amaninzi, kuba izalisekisa oko ikuthembisayo. Nangona kunjalo, iza nemisebenzi enomdla, kunye nobuchule benkqubo ngokubanzi kunye nokufumaneka kwiilwimi ezingaphezu kwe-11, kubandakanya iSpanish, isiNgesi, isiFrentshi, isiPolish, isiPhuthukezi, isiTaliyane, isiJapan, isiJamani, isiKorea, isiArabhu, isiHindi nesiTshayina.
Isivusi esilula sisivumela ukuba sikhethe isandi se-alamu phakathi kwazo zonke iithowuni, izandi kunye neengoma ezivela kwiselfowuni. Ukongeza, ngayo sinokukhetha ukhetho lokunyusa ngokuthe ngcembe ivolumu kunye nokushukuma kwethoni, ukhetho olunokuphunyezwa kuninzi lolu hlobo lweeapps ezingasweleki.
Umthuthukisi: Isoftware kaMoula
Alarm Pro elula
ixabiso: € 3,89
Asinakwenza le post ngaphandle kokukhankanya lewotshi eyaziwayo neyaziwayo ye-alamu, eza kuqala ifakwe kwiifowuni ezininzi ze-Android kwintengiso kwaye ziphantsi kukaGoogle.
Iwotshi yialam elula kodwa engqinelanayo. Uhlelo lokusebenza lusivumela ukuba siqwalasele ii-alamu ezininzi, kunye neentsuku apho ziya kuphindwa zodwa. Ukongeza, idibanisa isibali-xesha kunye nesitophuwotshi, kwaye sinokukhetha isikhuseli esidala okanye esidijithali. Kananjalo unokukhetha ukunyusa isandi se-alam.
Ngale sicelo, iintsasa zimnandi ngakumbiKulungile, kunye nezinye iiwotshi zealam ezikule post, iyasivumela ukuba siqwalasele iithowuni zesivusi ngokukhululekileyo, zisinike ithuba lokukhetha phakathi kokungagqibeki komnxeba kunye neengoma esizithandayo.
Iwotshi yealam iyandizalisela into engaphezulu nje kokusivusa. Esi sixhobo ukulwa nokulala Inexesha kwaye isibonisa iimeko zemozulu ngalo mzuzu. Ukongeza, ikwaxhasa iindlela ezahlukeneyo zokuvala ii-alamu kunye nobunzima obujikeleze i-13MB.
Umthuthukisi: IiApple zeAapp
Ikloko yealam isisixhobo se-retro esigqibeleleyo. Uyilo lwayo lusekwe kwinto elula, kodwa esebenzayo. Kuyo sinokumisela ii-alamu ezahlukeneyo ukulwa nokulala ekuseni, okanye nanini na xa sifuna. Ukongeza, ine-stopwatch kunye nexesha.
Kukwenziwe ngokwezifiso. Sinokukhetha imixholo eyahlukeneyo yemibala ngokwezifiso. Ngaphandle koko, singazicima okanye sizenze zingasebenzi ii-alamu ngeendlela ezahlukeneyo, apho imidlalo yezibalo ibalasele. Ukongeza koku, inengxelo yemozulu ngalo mzuzu ukuze singothuki yiyo nayiphi na imeko yezulu, efana nemvula.
Iwotshi yeAlarm Pro
ixabiso: € 2,69
Le yenye yezonaapps zewotshi ezikhulu kwivenkile ye-Android, ngaphandle kwamathandabuzo. I-alarm ye-Shake-it isinika imisebenzi emininzi enomdla, apho sibalaselisa ukushukuma kwefowuni ukwenza ii-alamu zingasebenzi. Enye indlela ekhethekileyo yokucima i-alam kukukhwaza: nje ukuba kuvakale, isikhalo esikhulu siyayiphelisa. Oku, kusinceda sivuke.
Sinokumisela enye indlela, engokuchukumisa okuninzi. Isivusi siyayeka ukukhala xa sisenza izinto ezininzi esikrinini. Ngaphandle koko, uyilo lwayo lubetha kakhulu kwaye lunempawu ezintle, umboniso oza kusikhupha kwimeko embi yakusasa. Kwelinye icala, isinika ulwazi lwemozulu yosuku, njengobushushu.
Umthuthukisi: SuperCommon eqhelekileyo
I-alamu Clock kunye noMculo kunye neeRiddle
I-alamu Clock kunye noMculo kunye neeRiddles lolunye usetyenziso esingenakulibala. Ngayo, iwotshi yealam kunye nesibali-xesha zisemathubeni ethu. Ukongeza, idibanisa esinye isixhobo esiluncedo: isibane. Ke, ukuba akukho kukhanya, ngekhe kube yingxaki ukubona ebumnyameni, kuba sinokukuvula kwisicelo esinye.
Ngakolunye uhlangothi, Le wotshi inexesha leHlabathi, ukhetho olusibonisa amaxesha ahlukeneyo kwingingqi nganye yeplanethi. Inayo nendlela yokususa ii-alamu ngokusombulula iipuzzle ezahlukeneyo. Ukongeza koku, ine-widget, sinokukhetha ithoni okanye umculo wokhetho lwethu, ibonisa iindaba kunye neemeko zemozulu zangoku, nokunye okuninzi.
Umthuthukisi: Indawo Yobutyebi LTD
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zibalaseleyo zeewotshi ezisuka kwiVidiyo kaGoogle